Disemba 2021 - SunTrust Blog
Ọnwa: December 2021
By Na -agba egwu December 31, 2021 Technology 0 Comments
– Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji mụọ Java? - Ogologo oge ọ na-ewe iji mụta Java ga-abụ otu ajụjụ ga-apụta n'uche gị mgbe ịmalite njem na mmemme. Ọ ga-ewe 10...
Ọnọdụ ngwa kaadị kredit Suntrust yana ngwa kaadị kredit ndị ọzọ
By Ndị ọrụ TMLTS December 31, 2021 Kaadị akwụmụgwọ 0 Comments
- Ọnọdụ Ngwa Kaadị kredit Suntrust - Itinye n'ịntanetị maka Mastercard ọzọ bụ usoro dị mfe ma dị mfe. Ị na-enye aha gị, adreesị, nọmba nchekwa ọha, na data azụmahịa gị. N'oge ahụ, ị ​​jidesie ike ịchọta ngwọta ...
Ndị Postmụnna ibe ọ bara uru? Uru na ọghọm nke ndị ibe
By Na -agba egwu December 31, 2021 Business 0 Comments
– Ndị ibe akwụkwọ ozi ọ bara uru? – Ndị ibe akwụkwọ ozi ọ bara uru? Ọ bụrụ na ị na-atụ anya ka ị nweta ego na-enweghị isi na ikekwe ị nụla gbasara onye gị na ya ga-eso ụzọ. Ndị ibe akwụkwọ ozi ọ bara uru? Uru na ọghọm nke ndị ibe akwụkwọ akụkọ a na-ekpuchi ihe niile ị ga-achọ...
You nwere ike iri A carp Asia? Otu esi ehicha akwa Carp Asia.
By Na -agba egwu December 31, 2021 blog, Food 0 Comments
- Ị nwere ike iri Asia Carp? – Nke a bụ otu n’ime ajụjụ ndị a na-ajụkarị gbasara azụ̀ azụ̀ ndị Eshia Carp. Ajụjụ ndị ọzọ ị nwere ike ịjụ nwekwara ike ịbụ, kedu ka ọ si dị. Kedu ihe dị iche na ya na ...
Kọ ihe ụfọdụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na ebe ọrụ & ndụmọdụ maka ebe ọrụ dị irè
By Victoria Akpan TMLT December 30, 2021 Business 0 Comments
- Ihe ọghọm nke ịrụkọ ọrụ ọnụ n'ebe ọrụ - Mgbalị ebe ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na ọrụ nwere ike ime ka ndị ọrụ na-arụpụta ihe na mmepụta ihe. Ọrụ otu nwere ike inye aka mee ka ọrụ rụọ ọrụ ngwa ngwa. Ọ nwere ike inyere ndị nlekọta aka ịmata nkà nke ndị ọrụ ha ma kpughee ntụziaka ...
Etu aga-esi kagbuo kaadị akwụmụgwọ ezuru ezu maka ndị ji kaadị Bank of America
By Victoria Akpan TMLT December 30, 2021 Kaadị akwụmụgwọ, Finance 0 Comments
– Otu esi akagbuo kaadị debit zuru ezu – Kaadị debit furu efu nwere ike ịpụta otu n’ime ihe abụọ: I mejọrọ ya ma ọ bụ mmadụ zuru ya. Kedu ụzọ ọ bụla, ekwela ka ụjọ daa. Nke a bụ ihe ị nwere ike ime. Otu esi...
Otu esi enyocha mkpesa ndị ọrụ na ndị ezighi ezi iji zere
- Otu esi enyocha mkpesa onye ọrụ - Ọ bụrụ na nsogbu ma ọ bụ nchegbu abịala na azụmahịa gị, nyocha nke ọma ga-enyere gị aka ịchọpụta ihe merenụ. Ịzaghachi ngwa ngwa na mkpesa na nyocha agaghị enye naanị ...
Ihe Mere Ndị Nkụzi Ji Kwụsị Ọrụ Ha: Ebumnuche Eziokwu Na-enyocha
By Victoria Akpan TMLT December 30, 2021 Uncategorized 0 Comments
- Ihe kpatara ndị nkuzi ji kwụsị ọrụ ha - ị nwere ike ịnọ na-eche, gịnị kpatara ndị nkuzi nwere oke na ịnụ ọkụ n'obi maka ọrụ ha ji hapụ ọrụ ha. N’isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe kpatara ya. Atụlere ihe ezi uche dị na ya, Ihe kpatara ndị nkuzi ji kwụsị ọrụ ha: enweghị…
Njikọ nke ndị na-ese agba: Uru na ọghọm ofbanye na Union
– Otu ndị na-ese ihe – Njikọ ndị na-ese ihe: International Union of Painters and Allied Trades (IUPAT), ma ọ bụ ndị na-ese ihe na nkenke, bụ njikọ nke nwere ndị otu 140,000 na United States na Canada. Uru na ọghọm dị na ịbanye n'otu. Ọ...
Aha Businessy Handyman: Echiche 250 kacha elu iji nyere gị aka ịmalite azụmahịa
- Aha azụmahịa Handyman - Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmalite azụmahịa aka, ị nweta echiche aha azụmaahịa kacha mma bụ ihe ịma aka. Ọtụtụ ndị ọrụ aka na-amasị iji aha nke ha. Echiche 250 kacha mma maka...